လုပျငနျးခှငျမှာအောငျမွငျဖို့အတှကျ Soft-Skill လိုတယျ . . .
လို့ မယေုတှေးနမေိတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂နှဈလောကျကမှရောကျလာတဲ့ ညီမလေးတဈယောကျတောငျ ရာထူးတကျပွီးလစာတှကေောငျးကုနျပွီ။ ဘာလို့ မယေုကရာထူးမတိုးနိုငျသေးတာလဲ။ ဒီလိုစိတျရှုပျထှေးစရာတှနေဲ့ပွညျ့နတေဲ့ မယေုတဈယောကျ ရုံးမှာအလုပျလုပျရတာလညျးမပြျောတော့ဘူး။ ဒီအတှေးတှနေဲ့ပဲ ဘာဆကျလုပျရမလဲမသိတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ရကျသတ်တပတျတှကွောလာတော့ မယေုတဈခုစဉျးစားမိလာတယျ။ ငါဒီတိုငျးဆကျသှားနလေို့တော့မရတော့ဘူး။ တဈခုခုတော့ငါရှာဖှမှေဖွဈတော့မယျဆိုပွီး စတငျရှာဖှလောတော့တယျ။
မယေုက သူ့ရဲ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ မွိုငျ့ကို ပွောပွတယျ။ မွိုငျနဲ့မယေုက တက်ကသိုလျစတကျတညျးက တအားခဈြခဲ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးတှပေေါ့။
မယေု- “မွိုငျရေ ငါလေ နငျ့ကိုသိပျအားကတြာပဲ။ ငါတို့လုပျငနျးခှငျဝငျကွတာလညျးတူတူပဲ။ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ နငျက နငျ့ရုံးမှာ နရောကောငျးတဈခုကိုရနပွေီ။ ငါကတော့ ဒုံရငျးကဒုံရငျးပဲ။ တဈခါတဈလကေတြော့တအားစိတျညဈတယျဟာ။” ဆိုပွီးရငျဖှငျ့လာပါတယျ။
မွိုငျ- “ ယုမ နငျစိတျညဈမနနေဲ့။ စိတျညဈနလေို့မပွီးဘူး။ အဖွရှောမှရမှာပေါ့။ ငါလေ နငျ့ကိုသူငယျခငျြးအခငျြးခငျြးမလို့ ပွောတာနျော။ နငျက တအားအေးလှနျးတယျ။ အပှငျ့လငျးဆုံးပွောရရငျ Soft-Skill တှနေငျလိုနသေေးတယျ။ ဒါက နငျ့လကျရှိရဲ့အဖွပေဲလို့ ငါမွငျတယျ။ နငျက နငျ့လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျပွီး နငျမသိတာဘာမှမရှိပါဘူးဟာ။ ဒါပမေယျ့ Soft-Skill လိုနတေော့ နငျ့တကျလမျးနှောငျ့နှေးနတောပေါ့။” လို့ မွိုငျကပွောတော့
မယေုစိတျထဲ အငျတငျတငျဖွဈသှားပါတယျ။ တကယျဆို မယေုက ရုံးမှာ နှဈရငျ့စီနီယာလညျးဖွဈသလို လုပျငနျးပိုငျးကိုလညျးကြှမျးကငျြသူတဈယောကျပါပဲ။ လုပျငနျးတဈခုမှာ လိုအပျတာဒါပဲမဟုတျဘူးလား လို့ မယေုစိတျထဲတှေးနမေိတယျ။ ဒါနဲ့
မယေု- “အလုပျမှာ အဓိက က လုပျငနျးပိုငျးကြှမျးကငျြဖို့မဟုတျဘူးလား။ ငါ့အလုပျငါလုပျပွီး ရုံးကို ငါပံ့ပိုးနတောပဲလေ။ ဘာလို့ Soft-Skill ကလိုအပျတာလဲ။” လို့ အကနျလေးမေးလိုကျတော့
မွိုငျ-“ မဟုတျဘူး ယု ရဲ့။ လုပျငနျးတဈခုမှာ အလုပျလုပျနိုငျရုံနဲ့မပွီးဘူး။ နငျ့ရဲ့ လုပျငနျးကြှမျးကငျြမှုက Hard-Skill ပဲ။ Soft-Skill က လုပျငနျးတိုငျးအတှကျလိုကိုလိုအပျတယျ။ လုပျငနျးတှမှောမှမဟုတျဘူး။ နစေ့ဉျဘဝမှာလညျး အရေးကွီးတာပဲ။”
မွိုငျ- “ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါတို့နစေ့ဉျရှငျသနျနရေတာက လူမှုအဖှဲ့အစညျးမှာဖွဈနလေို့ပဲ။ လူမှုဝနျးကငျြမှာရှငျသနျကွရတာဖွဈတဲ့အတှကျ လူတှနေဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံရတယျ။ ဒီလို လူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံတဲ့အခါ Soft-Skill ကအရေးကွီးလာရော။
ဥပမာ- ကုမ်ပဏီမှာဆိုရငျ ပရောဂကျြအသဈတှအေတှကျ အထကျလူကွီးတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျတဲ့အခါသူတို့ လကျခံလာအောငျညှိနှိုငျးကွရတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အိုငျဒီယာအသဈတှကေို လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို လကျခံလာအောငျခပြွရတယျ။ ဒီလိုအရာတှကေို ကြျောဖွတျတဲ့အခါ အောငျမွငျနိုငျဖို့အတှကျက လုပျငနျးပိုငျးကြှမျးကငျြရုံနဲ့မရတော့ဘူး။ Soft-Skill တှပေါလိုအပျလာတာပေါ့။ နငျ့ရဲ့ Soft-Skill ကောငျးလေ အောငျမွငျမှုကို နငျပိုရနိုငျလပေဲလေ။
မယေု နညျးနညျးတော့သဘောပေါကျလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပိုပွီးရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိခငျြတဲ့အတှကျ
မယေု- Soft-Skill တှကေ ဘာတှလေဲ။
မွိုငျ - ဘာတှလေဲဆိုတော့
2. Organization Skill
4. Critical Thinking Skill
မယေု ထပျပွီး အငျတငျတငျဖွဈသှားပါတယျ။ ပွီးတော့
မယေု-“ အဲ့တာတှအေကုနျ အလုပျလုပျရငျးငါသိခဲ့ပွီးသားတှပေဲလေ။ ငယျငယျတညျးကလညျးသိတာပဲကို။ နငျ့ဟာကလညျး။” ဆိုပွီး ခပျသောသောလေးပွောလိုကျတော့....မွိုငျက
မွိုငျ-“အေးလေ နငျသိခဲ့ပွီးသားတှပေဲ။ အခုနငျပွောတဲ့စကားထဲမှာပဲ အဖွပေါတယျ။ နငျပွနျစဉျးစားကွညျ့ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ငါတဈခုတော့နငျ့ကို စကားတဈခုပါးမယျနျော။” “Don’t go soft with your Soft-Skill.”
ဒီလောကျနဲ့ပဲ စကားစဖွတျပွီး ကိုယျ့အိမျကိုယျပွနျလာကွတယျ။
မယေုတဈယောကျတော့ အိမျပွနျလမျးတဈလြှောကျမှာ သူဘာဆကျလုပျရမယျဆိုတာသိသှားသလိုမြိုး ခွလှေမျးတှပေေါ့ပါးပွီးအားအငျတှပွေညျ့နခေဲ့ပါတယျ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက် Soft-Skill လိုတယ် . . .
လို့ မေယုတွေးနေမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကမှရောက်လာတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်တောင် ရာထူးတက်ပြီးလစာတွေကောင်းကုန်ပြီ။ ဘာလို့ မေယုကရာထူးမတိုးနိုင်သေးတာလဲ။ ဒီလိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ မေယုတစ်ယောက် ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ရတာလည်းမပျော်တော့ဘူး။ ဒီအတွေးတွေနဲ့ပဲ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေကြာလာတော့ မေယုတစ်ခုစဉ်းစားမိလာတယ်။ ငါဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့တော့မရတော့ဘူး။ တစ်ခုခုတော့ငါရှာဖွေမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး စတင်ရှာဖွေလာတော့တယ်။
မေယုက သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မြိုင့်ကို ပြောပြတယ်။ မြိုင်နဲ့မေယုက တက္ကသိုလ်စတက်တည်းက တအားချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။
မေယု- “မြိုင်ရေ ငါလေ နင့်ကိုသိပ်အားကျတာပဲ။ ငါတို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတာလည်းတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ နင်က နင့်ရုံးမှာ နေရာကောင်းတစ်ခုကိုရနေပြီ။ ငါကတော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့တအားစိတ်ညစ်တယ်ဟာ။” ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်။
မြိုင်- “ ယုမ နင်စိတ်ညစ်မနေနဲ့။ စိတ်ညစ်နေလို့မပြီးဘူး။ အဖြေရှာမှရမှာပေါ့။ ငါလေ နင့်ကိုသူငယ်ချင်းအချင်းချင်းမလို့ ပြောတာနော်။ နင်က တအားအေးလွန်းတယ်။ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် Soft-Skill တွေနင်လိုနေသေးတယ်။ ဒါက နင့်လက်ရှိရဲ့အဖြေပဲလို့ ငါမြင်တယ်။ နင်က နင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နင်မသိတာဘာမှမရှိပါဘူးဟာ။ ဒါပေမယ့် Soft-Skill လိုနေတော့ နင့်တက်လမ်းနှောင့်နှေးနေတာပေါ့။” လို့ မြိုင်ကပြောတော့
မေယုစိတ်ထဲ အင်တင်တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ်ဆို မေယုက ရုံးမှာ နှစ်ရင့်စီနီယာလည်းဖြစ်သလို လုပ်ငန်းပိုင်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လိုအပ်တာဒါပဲမဟုတ်ဘူးလား လို့ မေယုစိတ်ထဲတွေးနေမိတယ်။ ဒါနဲ့
မေယု- “အလုပ်မှာ အဓိက က လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလား။ ငါ့အလုပ်ငါလုပ်ပြီး ရုံးကို ငါပံ့ပိုးနေတာပဲလေ။ ဘာလို့ Soft-Skill ကလိုအပ်တာလဲ။” လို့ အကန်လေးမေးလိုက်တော့
မြိုင်-“ မဟုတ်ဘူး ယု ရဲ့။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။ နင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုက Hard-Skill ပဲ။ Soft-Skill က လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်လိုကိုလိုအပ်တယ်။ လုပ်ငန်းတွေမှာမှမဟုတ်ဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း အရေးကြီးတာပဲ။”
မြိုင်- “ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါတို့နေ့စဉ်ရှင်သန်နေရတာက လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်နေလို့ပဲ။ လူမှုဝန်းကျင်မှာရှင်သန်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတယ်။ ဒီလို လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ Soft-Skill ကအရေးကြီးလာရော။
ဥပမာ- ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင် ပရောဂျက်အသစ်တွေအတွက် အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါသူတို့ လက်ခံလာအောင်ညှိနှိုင်းကြရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို လက်ခံလာအောင်ချပြရတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်က လုပ်ငန်းပိုင်းကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့မရတော့ဘူး။ Soft-Skill တွေပါလိုအပ်လာတာပေါ့။ နင့်ရဲ့ Soft-Skill ကောင်းလေ အောင်မြင်မှုကို နင်ပိုရနိုင်လေပဲလေ။
မေယု နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်တဲ့အတွက်
မေယု- Soft-Skill တွေက ဘာတွေလဲ။
မြိုင် - ဘာတွေလဲဆိုတော့
မေယု ထပ်ပြီး အင်တင်တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့
မေယု-“ အဲ့တာတွေအကုန် အလုပ်လုပ်ရင်းငါသိခဲ့ပြီးသားတွေပဲလေ။ ငယ်ငယ်တည်းကလည်းသိတာပဲကို။ နင့်ဟာကလည်း။” ဆိုပြီး ခပ်သောသောလေးပြောလိုက်တော့....မြိုင်က
မြိုင်-“အေးလေ နင်သိခဲ့ပြီးသားတွေပဲ။ အခုနင်ပြောတဲ့စကားထဲမှာပဲ အဖြေပါတယ်။ နင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုတော့နင့်ကို စကားတစ်ခုပါးမယ်နော်။” “Don’t go soft with your Soft-Skill.”
ဒီလောက်နဲ့ပဲ စကားစဖြတ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်လာကြတယ်။
မေယုတစ်ယောက်တော့ အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိသွားသလိုမျိုး ခြေလှမ်းတွေပေါ့ပါးပြီးအားအင်တွေပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
Read times Last modified on Tuesday, 12 January 2021 12:11